देशको अहित सोच्ने सबै देश द्रोही हुन् -नेता ओसिम आलम | देशको अहित सोच्ने सबै देश द्रोही हुन् -नेता ओसिम आलम – हिपमत
देशको अहित सोच्ने सबै देश द्रोही हुन् -नेता ओसिम आलम
सरिता गिरीलाई मात्र होइन शेखर कोइराला र शिवकुमार मण्डललाई समेत कार्यवाही हुनु पर्ने धारना राख्दै आउनु भएका मोरङ नेकपा सचिवालय सदस्य तथा अनेरास्ववीयूका केन्द्रिय नेता ओसिम आलम संग हिपमत कर्मी प्रकाश प्रेमीले वर्तमान समसामयिक विषयमा गर्नु भएको कुराकानीको संपादित अंश
यती लामो लकडाउन कसरी बिताउनु भयो ?
कुनै न कुनै कामले सधै हिंडी रहने मान्छेको लागि यो सत्तहरतरी दिनको लामो लकडाउन घरमै बसेर बिताउनु निकै चुनौतीपूर्ण थियो । त्यसमा पनि हामी समाज सेवामा खटिनेहरुको लागि त झन्न गार्हो थियो, तर हामीले यो अवस्थामा पनि सारकारको नीति निर्देशन र मापदण्डको पालना गर्दै समाज सेवामा लागि रह्यौ । आफ्नो स्वस्थ्योको ख्याल गर्दै गरिब, निसहाय, विपन्न परिवार तथा बिराटनगरको सडक पेटीमा भोक भोकै बसेका आम जनतालई बिहान बेलुुका खाना खुवायौ । सत्तहत्तरी दिन सम्म प्रत्येक दिन करिब ४२० जना लाई खाना खुवायौ । यसमा हामीले कसै संग कुनै किसिमको पोलिटिकल वा अन्य सहयोग लिएका छैनौ । हामी समाज सेवामा सक्रिय युवाहरु हाम्रो अभियान टिम बनाएर आफै यो कार्यमा लगि रह्यौ । यो सेवा अहिल पनि जारी नै छ । तर अब लकडाउन खुले पश्चात आषाढ एक गते देखि एक छाक बेलुका मात्र यो सेवा संचालन रहने छ ।
युवाको कुरा गर्नु भयो, अहिले त युवाहरु निकै चर्चामा छ नी ? कोरोना कालमा पनि सडकमा उत्रिएका छन ?
बिरोध गर्नु युवाको सहज स्वभाव हो र हुनु पनि पर्छ । युवा भनेकै उर्जावान शक्ति हो । युवको उत्साहमा कमी पनि हुनुहुदैन । जहिले पनि सजग र सक्रिय हुनुपर्छ । परिवर्तनकारी हुनुपर्छ र अहिले युवाहहरु पनि आफ्नो सक्रियता जनाई रहेका छन् । तर, बिरोधको नाउँमा विभेदकारी, बिखण्डनकारी, जातिय तथा सामुदायिक द्वन्द्व निमत्याउने खालको उतश्रृंखलता अपनाउनु भएन । व्यक्तिगत वहवाहीको लागि कसैलाई घोचघोचाउने कार्य गर्नु हुँदैन ।
त्यसो भए अहिले सडकमा उत्रिएका युवाहरुलाई तपाई कुन रुपमा लिनु हुन्छ ?
हेर्नुस, आन्दोलनमा उत्रिएका सबै युवा स्वतन्त्र होइन तर यसमा स्वतन्त्र पनि हो । दुबै खालको युवाको आ–आफ्नै उद्देश्य छन् । हो, आफ्नो माँगको लागि आन्दोलन गर्नु पर्छ । सरकारसंग जबाफ माँगनु पर्छ र सरकारालई पनि आफ्नो जनताको चित्त बुझाउनु पर्छ । ७०–८० दिनको यति लामो लकडाउनमा पनि सरकारले एघार किलो चामल, दुई किलो दाल, एक किलो नुन र एक लिटर तेलसहितका समान बाँडेर जनताको अवस्था समेत बुझन आएन । के एघार किलो चामलले एउटा परिवारको सत्तरी दिन सम्म खाना पुगछ ? पक्कै पुग्दैन त्यो पनि आक्रोश छ जनतामा । कोरोनाको चेक जँच, क्वारेन्टाइन, विदेशबाट आएकाहरुको व्यवस्थापन । आखिर स्थानीय सरकारले आफ्नो जनताको लागि के गर्यो त ? प्रदेश सरकार क्वाराइन्टेनमा पत्रकार सम्मेलन गराएर कोरोनाको अपडेट मात्र सार्वजनिक गर्ने कि दैनिक ज्यालादारि गर्ने गरिब असहाय जनताको को विषयमा पनि सोच्ने ? के गर्यो त प्रदेश सरकार ? लकडाउनकै समयमा हेर्ने हो भने बैंकका अगाडि ठूलो भीड जम्मा हँुदा कोरोना सर्दैन तर त्यहि छेउमा रहेको कपडा पसल खुल्दा कोरोना सर्ने ? भारत बाट तरकारी अयात गरेर बेच्ने तर आफ्नै किसानको बारीमा तरकारी नष्ट हुँदा, चुप्प लगाएर बस्ने ? घर भाडा, बैंक ऋण मिनहा गर्नको लागि आग्रह गर्ने तर कार्यान्वयन भयो कि भएन भने विषयमा खज खबरै न लिने ? यो विभेदकारी नीति भएन सरकारको ?
त्यसो भए कोरोनाको नाउँमा भ्रष्टाचार भएकै हो त ?
त्यो म भन्न सकिदैन । किनकी म संग त्यसको कुनै प्रमाण छैन । तर यदि भ्रष्टाचार भएको हो भने भ्रष्टाचारीलाई कानुनी कारबाई हुनै पर्छ । यदि भ्रष्टाचार भएको होइन भने जनताको आवजलाई सरकारले जबाफ दिनुपर्छ । तर, यहाँ बुझनु के जरुरी छ भने अब हाम्रो देशमा तीन तहको सरकार छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकार । अब यो भ्रष्टाचार कुन सरकार बाट भएको हो ? त्याहाँ बिरोध गर्नु पर्छ । स्थानिय सरकार आफ्ने दलको छ भने प्रदेश सरकार वा संघिय सरकारको बिरोध गर्नु हुँदैन । प्रदेश सरकार वा संघिय सरकार आफ्नो दलको छ भने स्थानीयको बिरोध गर्नु हुँदैन ।
नेपालको नयाँ नक्सी जारी प्रतिको राष्ट्रि एकबद्धतालाई कुन रुपमा लिन भएको छ ?
नेपालको इतिहासमा यो ऐतिहासिक कार्य भएको हो । विश्व सामु एउटा राम्रो संदेश प्रसारित भएका छन् । राष्ट्रिय अखण्डता र एकतामा समपूर्ण नेपाली एक भएको हो । यसमा उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो नेपालको इतिहासमा एतिहासिक कार्य गर्नु भएको छ । आज सारा नेपाली वहाँलाई सैलुट गरेका छन् ।
त्यसो भए अब मधेशी समुदायलाई भारतीय भनेर गाली खानु पर्दैन ?
हेर्नुस, नेपाली बोल्दैमा ऊ राष्ट्रभक्त वा राष्ट्रवादी नेपाली हुने होइन । दार्जिलिङ्ग, सिक्किम, गढबाल सहितका स्थानमा पनि नेपाली बोलिन्छ तर उनीहरु नेपाली होइन । देशको राजधानी काठमाण्डौमै नेवरी भाषीहरुको बाहुलता छ तर के उनीहरु नेपाली होइन ? त्यस्तै मधेशमा पनि मैथिली, भोजपुरी, थारु, अवधि सहितका कैयो भाषा बोलिन्छ र यी सबै नेपाली हुन । नारा जुलुस लगाएर मात्रै राष्ट्रिवादी हुँदैन । मधेशी समुदाय वर्षो देखि देशको सीमा सुरक्षा गरि रहेका छन् । उनहिरु सुच्चा राष्ट्रवादी हुन् जसको प्रमाणको आवश्यकता छैन ।
तपाई आफ्नै पार्टीका नेता शिवकुमार मण्डल र नेपाली काँग्रेशका नेता डां शेखर कोइरालाप्रति पेशबुकमा कडा आलोचना गर्नु भएको छ नि ?
हो त्यो म अहिले पनि गर्छु, चाहे त्यो सत्ता पक्षको होस वा विपक्षको । राम्रो कामको समर्थन र गलत कामको विरोध गर्नु नै पर्छ र म त्यही गरेको छु । भारतले सडक उद्घाटन गर्दा हामीले बिरोध पनि गरेका हौं र नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्दा हामीले दिपावली पनि मनाएका हौं । तर, सम्पूर्ण नेपाली खुशी हुने यस एतिहासिक निर्णयमा शिवकुमार मण्डल मतदान गर्नु भएन र शेखर कोइराला उच्चस्तरी बैठकमा सहभागी हुनु भएन । वहाँहरुको यो दोधारे चरित्रलाई आम जनता के बुझने ? वहाँहरु समर्थनमा हो की बिरोधमा ? सरीता गिरी त खुलेरै बिरोध गरिन । खुलेर विरोध गर्ने त बिरोधी हो नै त्यासलाई काराबाहि हुनु नै पर्छ तर यीनिहरुलाई पनि छोडनु हुँदैन । दोधारे चरित्रले अब हुँदैन ।भारतमा बसेर निकै नै चर्चा कमाएकी नायिका मनिषा कोइरालाको अभिव्यक्तिलाई मैले समर्थन गरेको छ। नेपाली काग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले भारतीय टेलिभिजनमा जुन अडान राख्नु भयो त्यसको नि मैले समर्थन गरेको छु। हामि युवाहरुले राम्रोलाई राम्रो र खराबलाई खराब भन्न सक्नु पर्छ पार्टी र नेताको अन्धभक्त भएर हुदैन। वैचारिक स्पष्टता दृढताका साथ राख्नु पर्छ । यस्तो एतिहासिक निर्णयमा आफ्नो मतदान न गर्ने सबै माथी कारबाही हुनुपर्छ । यो मेरो जोरदार माँग हो ।
भारतीय मिडियाले . . . . . ?
भारतीय मिडियाको त कुरै छोडनुस । भारतीय मिडियाले त नेपालीलाई चिनियाँ नै बनाई दिए । जब कि भारतका कुनै पनि नेता, मन्त्री वा सम्बन्धित निकायले केहि पनि बोलेको छैन । भारतीय मिडिया त आफ्नै देश भित्र एक अर्कालाई जोडने होइन तोडने कार्य गर्दै छ । यस्तो हाम्रो बारेमा यस्तो भ्रामक समाचार सम्प्रेशन गर्नु उनीहरुको नियति नै हो ।
नक्सा त एतिहासिक रुपमै जारी भयो के जमीन पनि एतिहासिक रुपमै फिर्ता आउन सक्छ ?
पक्का आउँछ । तर, यही दिनमा आउँछ भन्ने छैन । यसको प्रकृया पुर्याएर अगाडि बढनु पर्छ । हाम्रा प्रमाणहरु लिएर भारत संग वार्ता गर्नु पर्छ र वार्ता बाट नै आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्छ । एक पटक भएन भने पटक पटक वार्ता गर्नु पर्छ । यदि त्यो पनि भएन भने अन्तराष्ट्रि अदालतमा जानु पर्छ । हामी संग प्रसस्त प्रमाण छ र प्रमाण दरो भए हाम्रो भूमि फिर्ता आउँछ नै आउँछ मा म विश्वस्त छु ।
अन्तयमा आन्दोलनरत युवाहरुलाई के भन्नु हुन्छ ?
आन्दोलनकै नाउँमा आन्दोलन गर्ने होइन । बिरोध गर्नु पर्छ तर बिरोधको आढमा संकुचित भावना राखि कसैलाई गाली गर्नु हुँदैन । सामाजिक सञ्जालमा विभेदकारी विचार सम्प्रेशन गर्ने होइन । अब उपदेश दिने दिन गयो । सरकारलाई मात्र गाली गर्नु भन्दा पनि आफैले केही गरेर देखाउने समय हो । अधिकांश युवा लहलहमै आन्दोलनमा सहभागी हुन्छ जब कि वहाँहरु संग प्रस्सत संभावना छ र आफै पनि धेरै कुरा गर्न सक्नु हुन्छ । त्यसैले वहाँहरुलाई सकारात्मक कार्यकालागि आफै अगाडी आउनु पर्छ ।